Duuliye sare Asli oo Deeq gaarsiiday Ciidanka Naafada Xoogga Dalka Soomaaliyeed | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Duuliye sare Asli oo Deeq gaarsiiday Ciidanka Naafada Xoogga Dalka Soomaaliyeed
Duuliye sare Asli oo Deeq gaarsiiday Ciidanka Naafada Xoogga Dalka Soomaaliyeed
Socdaalkeeda Asli ayaa ku saabsanaa in ay indha indhaydo xaalada adag ee ay ku noolyihiin Ciidanka Naafada Xoogga Dalka isla markaana ay u muujiso in ay garab taagan tahay iyo tan labaad oo ahayd in ay gaarsiiso deeq lacag ah oo ay ugu talo gashay.
Duuliye Asli waxaa ay la hadashay askartii ay ka wada tirsanaayeen Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed ee u dhaawacmay Difaaca Dalkooda Hooyo iyadoo aad ka dareemeyso gocasho iyo qiiro sida maanta xaalku yahay.
“waxaan ka xumahay sida aad maanta tihiin waayo waxaan soo xasuusanaayaa waqtigi aan soo wada qaadanay iyo wada shqeyntii ku aadneed Difaaca Dalka booqashadaydu maanta waxaa ay ku saabsan tahay inaan idin la qeyb-sado dhibka idin soo gaaray sidoo kale waxaan baaq u dirayaa jaaliyada Soomaaliyeed ku nool Dalka dibadiisa” waxaa sidaa tiri Duuliye sare Asli Xasan Nuur Cabaade”.
kornayl Aadan Magan Maxamed ayaa xasuustiisa dib u celiyay si qiiro lehna uga hadlay marxaladii xiligii iyo waayhii ay soo wada shaqeeyeen Duuliye Asli.
“waxaana kaaga mahad celinaynaa sida wanaagsan oo aad noo soo booqatay anigoo ku hadlaya Magaca Ciidamada Naafada Xooga Dalka Soomaaliyeed ee ku Naafoobay Dalkii saban saban (77) waxaad ahayd dadkii aan kasoo wada shaqeynay Difaaca Dalka Soomaaliyeed Duuliye sare Asli booqashada aad maanta noogu timid waxaa ay ka dhigan tahay sida aad inoo dhiiro galinayso taasoo ka dhigan in aan dad leenahay” sidaa waxaa yiri kornayl Aadan Magan Maxamed.
Bur-burkii iyo dhibaatooyinkii Dalku soo maray ayaa si gaara u saameeyey Ciidamada Naafada Xooga Dalka Soomaaliyeed.
Previous articleR/W ku-xigeenka Soomaaliya “Xukuumaddu waxay Samaynaysaa Siyaasad ay ku kordhinayso Dhaqaalaha, iyadoon la kordhin Canshuurta”
Next articleWasiirka Tacliinta sare oo Khartuum kulan kula qaatay dhigiisa Dalka Suudaan